Kedu ihe bụ Syslog Monitoring? | Uru nke Syslog Monitoring
Kedu ihe bụ Syslog?
Syslog, nke a makwaara dị ka Protocol Logging System, bụ ọkọlọtọ ọkọlọtọ nke a na-eji ezipu ozi mmemme ma ọ bụ ndekọ sistemụ na otu nkesa, Syslog server. A na-eji Syslog bụ isi ịnakọta ndekọ ngwaọrụ dị iche iche site na igwe dị iche iche wee chekwaa ya n'otu ebe etiti iji nyochaa na nyochaa.
A na-eme ka ụkpụrụ dị iche iche na-arụ ọrụ na ọtụtụ ngwa netwọk dị ka switches, scanners, routers, firewalls, printer, wdg Na mgbakwunye, Syslog dị na sistemụ arụmọrụ dị iche iche dị ka Unix na Linux na sava weebụ dị ka Apache. N'ikwu okwu maka Windows, anaghị etinye Syslog na ndabara nke na-eji Windows Event Log nke ha.
Kedu ihe kpatara nlekota Syslog ji dị mkpa?
Syslog bụ ọkọlọtọ osisi dabere na nzukọ ejiri maka ngwa izipu ozi na sava focal, na-enye data n'oge oge, ọnọdụ ya, na nke ahụ bụ naanị ọnụ ọnụ ice. N'adịghị ka SNMP, ụzọ na-arụ ọrụ iji nyochaa, Syslog nlekota na-enye usoro aloof, nke na-enye ndị otu ohere ijikwa ihe omume mgbe ha mechara. Ọkpụkpụ mkpụkpụ na-abụkarị ihe a na-apụghị izere ezere; Otú ọ dị, ihe na-akpali akpali Syslog nlekota ngwọta nwere ike na-agba ọsọ ọdịnaya n'ihi ya ma n'otu oge ahụ na-ezipụ ịdọ aka ná ntị email. N'ihi ya, ọ nwere ike mee ngwangwa njikwa ihe mmerụ ahụ, na-echekwa nkeji ma ọ bụ ọbụna ogologo oge nke onwe. Nke a nwere ike wedata mmetụta na njedebe ndị ahịa ma na-enyere ndị admins aka ịhụ foto sara mbara karị nke ihe na-eme na nzukọ a.
A na-akwado mgbakọ Syslog site na ụyọkọ ngwa, gụnyere ọtụtụ ngwa nhazi dị ka switches na switches, ngwa nbipute, firewalls na sava weebụ. Ozi Syslog na-ejikọta ozi nwere ụdị data dị iche iche ma tinye ọkwa arụrụ arụ arụrụ arụ site na 0 (Emergency) ruo 5 (Ịdọ aka ná ntị). Nke a na-eme nchekwa otu n'ime ngwa nleba anya maka Syslog. Enwere ike iji akụrụngwa a dị ịtụnanya na-elekọta ụlọ ọrụ dị mgbagwoju anya nwere nnukwu ozi chọrọ nhazi nleba anya ọnụ.
Iji jiri nlekota Syslog nke ọma, onye nchịkwa chọrọ sava Syslog na njedebe na-adịghị mma, yana ọtụtụ n'ime sava Syslog ndị a Windows anaghị akwado ya na mpaghara. N'ọnọdụ ọ bụla, enwere ike iwebata ọganiihu na-enyocha log nke ihe nkesa ma tinye ya n'ọrụ maka nke a.
Uru nke Syslog Monitoring
Ihe mgbagwoju anya nke ngwa na usoro nke oge a na-agbasawanye n'ezie. Iji ghọta omume nke usoro dị mgbagwoju anya, ndị nduzi / ndị na-emepụta ihe / Ops na ndị ọzọ na-achọkarị ikpokọta ma nyochaa data niile dị mkpa nke ngwa ha mepụtara. Ọzọkwa, a ga-enyocha data dị otú ahụ mgbe niile ma na-edekọrịta ya iji kpebie ka usoro ha si eme. Ya mere, ndị isi nwere ike itinye usoro ozi ezi uche dị na ya iji nyochaa ndị ọkwọ ụgbọ ala ozugbo okwu mere ma ọ bụ nweta ihe ọmụma n'ime usoro nhazi nke dabere na nyocha eziokwu.
Mgbe ọ bụla enwere ike, etinyela akwụkwọ ndekọ dị ka ebe ozi dị mkpa na nke siri ike iji meju ọrụ dị otú ahụ maka ọtụtụ uru, ụfọdụ n'ime ha dekọrọ ebe a:
- Ndekọ nwere ike inye ndị isi data na-agafe agafe iji weghachite usoro ahụ gaa n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị mgbe ndakpọ olileanya gasịrị. Dịka ọmụmaatụ, n'oge mgbe usoro ego na-adaba, mgbanwe niile furu efu site na ebe nchekwa bụ isi nwere ike ịdekọ na ndekọ.
- Ndekọ nwere ike ịnwe data dị iche iche dị iche iche nke ngwa ndị mmadụ na-enye iji nye ndị njikwa / ndị na-emepụta ihe / ndị na-arụ ọrụ aka ịghọta ụkpụrụ omume site n'ọtụtụ echiche dị ka nha usoro dị ugbu a, atụmanya ụkpụrụ na nyocha.
- A na-ede akwụkwọ ndekọ dịpụrụ adịpụ site na ngwa mbụ na mpaghara siri ike na nchịkwa dị n'èzí ruo n'ókè nke na a gaghị enwe ihe ngosi ọ bụla ozugbo na usoro nyocha site na iji akwụkwọ ndekọ ndị a. Na-esote, n'ọnọdụ ọnọdụ okike, ndị nlekọta nwere ike nyochaa ngwa na-agba ọsọ site na iji ndekọ ha na-enweghị nchekasị maka imerụ ogbugbu.
N'ọnọdụ ọ bụla, akụkụ dị oke mkpa nke nyocha log bụ ịghọta nhazi nke ozi ndekọ ndekọ, ọkachasị na ihu igwe dị iche iche ebe enwere ike imepụta ngwa dị iche iche site na iji nhazi ndekọ aha na mgbakọ ọgbakọ iji zipu ozi ndekọ ndị a. Ewezuga ma ọ bụrụ na nke a doro anya, ọ siri ike ịkọwapụta ozi ndekọ nke ngwa na-enweghị isi zitere. Iji dozie okwu a, Syslog na-akọwa ọkọlọtọ ndekọ maka usoro na ngwa dị iche iche iji gaa n'ihu na-azụ ahịa data ndekọ nke ọma. Nyere mgbakọ ịde osisi, Syslog na-enyere ngwa aka n'ịkọwa àgwà ndekọ ọ bụla nke ọma iji ghọta mkpa ozi log ahụ.